Ipaq yePC kwiTografikhi eneSemi-Station kunye neziKhululo zizonke - iGeofumadas
Ucando PC Ipaq kunye Semiestaciones ne Total ipetroli
Agasti, 2012 GPS / Izixhobo, ezintsha, Topography
Besendivile ngale nto, kodwa kule vidiyo umhlobo uxela kuthi, apho abonisa khona i-Ipaq njengesixhobo sangaphandle esigxunyekwe kwiSistimation and Station.
Le vidiyo ijongene nezona mibuzo zixhaphakileyo ebuzwa ziingcali kwindawo ye-topografikhi kunye ne-geoengineering malunga neempawu ze-Ipaq kunye nezibonelelo zokuyisebenzisa njengesixhobo sangaphandle esinesoftware kwibala elingaphezulu (ngexesha lokwenyani)
Malunga ne-Ipaq Pocket PC njengesixhobo sangaphandle esiphambili seSemi-Station neZikhululo zizonke kuPhando:
Ipaq Pocket PC yikhompyuter epokothweni enokunxibelelana nezikhululo zesikhululo kunye nezikhululo zizonke, iinkqubo ezifakiweyo (FieldGenius, Cartomap, TDS Cogo, Pocket Topo) zikuvumela ukuba usebenze kwindawo yendawo yokudlala kunye nembali yemveli ngezixhobo endle ( ixesha lokwenyani) ukuba ngaphambi kokuba iinkqubo ze-PC kuphela (i-Desktop) ibe nayo, oku kuvumela izigqibo ngokukhawuleza ebaleni kwaye kuphucule intsebenzo ukuya kuthi ga kwi-50% kwiimeko ezininzi nokushenxisa iimpazamo zokuphakamisa, ukubamba, njl njl. ezibangela iindleko ezigqithileyo kuba uyeka ukusebenza kanjalo yimfama kwaye iya Kunjalo Kwenziwa ntoni emhlabeni.
Ipaq Pocket PC ingasetyenziswa nasiphi na isikhululo i-Semi engarekhodi amanqaku, kwizikhululo ezirekhoda amanqaku okanye izitishi ezirekhoda amanqaku amaninzi, eyona mfuneko kukuba ine-RS232 port port yokunxibelelana (apho intambo ye-PC ixhunyiwe), Ingasetyenziselwa iTopcon, Sokkia, South, Leica, Pentax, Iimpawu zika-Nikon.
Kunye nesixhobo se-Ipaq Pocket PC sinokusetyenziswa kwizikhululo ezindala (i-1984) nakwizikhululo zamva nje, imfuno kuphela kukuba ine-RS232 port, intambo yonxibelelwano phakathi kwesikhululo kunye / okanye isikhululo kunye nesixhobo se-Ipaq Pocket PC sihanjiswa i-brand efanelekileyo (i-Topcon, iSokkia, South, Leica, Pentax, Nikon). Ewe kunjalo, iindleko zomqokeleli we-Ipaq Pocket PC ziphantsi kunezabaqokeleli bemveli kwaye ziqukethe izixhobo zokusebenza ezingakumbi.
Abavavanyi abasele benayo ii-Semistastations (ezo zingashicileli amanqaku) esi sixhobo siya kubavumela ukuba babuyela ebaleni kwaye benze umsebenzi oqhubekileyo ngaphandle kwesidingo sokwenza imali ebizayo ngokufumana izitishi ezibizayo, kubaPhononongi abanezikhululo ezindala okanye ezitsha ezinokusetyenziswa kwesi sixhobo ukuba nezixhobo ezifana noMhlaba ebaleni.
Ipaq Pocket PC esetyenziswe kunye neGPS
Ipaq Pocket PC ikwasebenza ukusebenza ngeendlela ezahlukeneyo zeGPS (RTK, L1, L2, elula njl), unxibelelwano lwenziwa ngeBluetooth, ikhebula okanye ikhadi; Isetyenziswe kwiToografikhi kunye neGPS, i-Cartography, indlela, iiNkqubo zeeNkcukacha zeJografa kwicandelo (GIS / GIS).
Ukusebenza nge-TDS RECON
Kwiingcali ezineTDS RECON Collector okanye ezifanayo, ungazifakela iinkqubo kwisixhobo kwaye ke unezixhobo zokusebenza ezingakumbi; Umqokeleli we-TDS RECON wenziwe ngokwezifiso ukuze akwazi ukubuyisela izixhobo ezikwimida (ngaphandle) ngaphandle kokubhenela kwikhompyuter (eofisini) ukuchitha ixesha kunye nokusebenza kuloo nkqubo.
Ividiyo ingaphezulu kokulingeneyo, alithandabuzeki elokuba ziyinto eqhelekileyo enomdla. Kulabo ababenemibuzo okanye iminikelo, ndishiya idatha kaJohn
UJohn Afanador R.
Post edlulileyo«Edlulileyo I-International Virtual Cadastral Symposium
Post Next I-Kiva, ukusetyenziswa kobuchwephesha kunye neentlawulo ezincinci ukuzuza amaninziOkulandelayo "
I-10 iphendula kwi- "Ipaq PC kwiTografikhi eneSemi-Station kunye neZiko leMfundo elipheleleyo"
Luis Villalta uthi:
Molo, ndifuna ubuchule bendawo ye-ipaq yam, ndingayifumana njani?
Amilkar nje uthi:
Mhlobo othandekayo, ndivela eVenezuela, sinengxaki enkulu xa kusiziwa ekufumaneni iidola, bekukho ne-devaluation entsha, yiyo loo nto ndingakhange ndikwazi ukwenza isicelo senkqubo ukuba singathethathethana ngexabiso lemali yaseVenezuelan kwaye ndikwazi ukufaka i-akhawunti ngemali endinomdla kakhulu kuyo kodwa andinalo ithuba lokuwukhawulezisa.
Ulwazi oluhle kakhulu ndinesitishi se-Nikkon topgun D50 semi station kwaye ndingathanda ukwazi ixabiso kwiidola ze-Ipaq kwaye ukuba sele beyinikeze nenkqubo ye-toppyrafi kwaye ingakanani iRS232 indleko. Iyandikhuthaza, ndikubhalela kwa-El Salvador. Imibuliso
Jonga ikhonkco kwinqaku, unxibelelane nabo kuba senze kuphela ingxelo kwaye sapapasha inqaku.
Imibuliso yomhlobo othandekayo:
Ndinomdla kwinkqubo ye-ipaq ndingathanda ukwazi ukuba iindleko zithini, kwaye intambo yesitishi ndinepentax.
I-LUIS ACOSTA uthi:
Mhlobo othandekayo, yimeko yokuba eVenezuela sinengxaki enkulu xa kuziwa ekufumaneni iidola, bekukho ne-devaluation entsha, yiyo loo nto ndingakwazi ukubonelela ngenkqubo ukuba sinokuxoxa ngexabiso lemali yaseVenezuelan kwaye sikwazi ukufaka imali kwiakhawunti Ndinomdla kakhulu kodwa andinalo ithuba lokuwukhawulezisa.
UDosmar Carrasquel uthi:
Ndingazifumana phi ezi nkqubo zikhankanyiweyo B?
Luis Acosta uthi:
Ndikwanxibelelana nemizobo ukwenza ikhebula
molo ndine-aipaq yam kodwa andifumani cwecwe lesikhululo sik-nikon a20lg ndingathanda ukwazi ukuba unayo kwaye luphi uxinzelelo onalo onalo lokunikela ngemali yaseVenezuelan ukuze ube nombulelo
jiger guaman uthi:
Ndingathanda ukwazi ixabiso lamaqokeleli eBolivian pesos